Cabsi Mareykanka Ka Soo Food Saartay Horumarka Hubka ee Ruushka Iyo Shiinaha | Xaqiiqonews
Cabsi Mareykanka Ka Soo Food Saartay Horumarka Hubka ee Ruushka Iyo Shiinaha
Taliyaha taliska istaraatiijiyadda Mareykanka janaraal John Hutton ayaa sheegay in Ruushka Iyo Shiinaha aysan aheyn saaxibada Mareykan, Waxa uu sharxay in Moscow iyo Beijing ay kobcinayaan awoodahooda hubka, oo gaaray ilaa heer ay helaan hub ka dheereeye socodka codka, arinkaasi ooo buburin kara Mareykanka, halka Washington weli ku maqan tahay ka fikirka awoodda ay kaga jawaabayso hubkaas.
Xilli Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump uu la dhibaatoonayo fikradda ah “America First”(Marka koowaad Mareykan) oo ku saabsan heerka dhaqaalaha iyo ganacsiga, dhanka kale hoggaamiyeyaasha millatariga Maraykanka ayaa u arkaa inay ay tahay fursad millatari oo cabsi gelin ah oo dadka lagu cabsi geliyo Ruush iyo Shiine, wallow cabsi gelinta ay dhaaftay xadka digniin, ilaa ay gaartay heer labadan wadan loo aqoonsado cadow.
Waa kan taliyaha Taliska Istaraatiijiyadda ee Maraykanka, General John Hutton, wuxuu sheegayaa in Ruushka iyo Shiinuhu aysan ahayn saaxiibo Maraykan.
Intii lagu guda jiray Seminar ku saabsan difaaca gantaalaha oo ka socday saldhigga Huntsville, ee gobolka Alabama, ayaa taliyahan ameerikanka ah sheegay in Moscow iyo Beijing ay kobciyaan awoodaha hubka dheereeye, halka Maraykanka weli uu awood u lahayn inuu wax ka qabto arimahaasi.
Ugu dambeyntii sarkaalkan Maraykanka ah waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in si degdeg ah Mareykanka u soo saaraan hubka codka ka dheereeya(Hypersonic weopon).
Mashruucan(Sameynta hubkan) ayaa sidaa uu John Hutton ku doodaaayo, waxaa fikirkiisa la soo bandhigay 10 sano ka hor, balse sameyntiisa ayaa dib loo dhigay madaama aysan jirin qatar qasbeysay-sida uu hadalka u dhigay.